Tahaka ny fakan-tsarimihetsika toy ny Detectar E Corrigir Páginas Com Conteúdo Duplicado
Ny fifandimbiasana an-dalam-pandrosoana lehibe indrindra rehefa mandeha amin'ny sokajy fiaramanidina. SEO dia fomba fiasa feno, izay mampiseho tarehy toy ny marketing marketing, fananganana rohy sy marketing ho an'ny mozika sosialy. Tsy azo atao, mampifanaraka ny duplicate ny fifanarahana - cla tonalin solgar posologie metronidazole. Ireo karazana karazana fomba fiasa dia:
Required apenas pequenas mudanças técnicas
Ny fikaon-daza dia tonga avy amin'ny famerenana an-tsary
Google Crawlers on Google Maps
O especialista da Semalt Ireo sampan-draharaha nomerika, Igor Gamanenko dia nanambara fa toy ny duplicado duplicado koretamente.
Como conteúdo duplicado dilui a autoridade
Mifanaraka amin'ny bilaogy ny webmaster ho an'ny google, ny fanambaràna ny tranonkala amin'ny tranokalan'ny Web na ny bilaogy raha toa ka adiresy URL ianao. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Jereo fepetram-pampiasana ho an'ny antsipirihany. Manome fahafaham-po ny fahafahana mampiasa ny rohy amin'ny alalan'ny serasera.
Ny fanamafisana ny rohy miaraka amin'ny fanovozan-kevitra 301 ho an'ny tranonkala voalohany dia ny fampiasana ny rohy rehetra ho an'ny tontolon'ny lohahevitra. Avy amin'ny loharanom-baovao iray sy ny trangan-javatra hafa momba ny mediam-bahoaka, na ny vokatra azo avy amin'ny Google hipetraka.
Ny Saber dia manana olana momba ny duplicato mahomby. Manana tombony amin'ny fiara fitaterana tahaka ny Google (na anao ianao), tsy mila tranonkala: yoursitename.com. Raha toa ka misy pejy iray azo ampiasaina ho an'ny fifanintsanana dia lisitry ny rakitra. Ny fehin-kevitra iray dia milaza fa ny sehatra manokana, na ny vokatra, dia ny fidirana ankapobeny ho an'ny Google..
Tsy misy afa-tsy ny duplicate conteúdo finday ny mamantatra ny fonosana na ny endriky ny pejy amin'ny Google. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Ny fanamarihana dia mety hiditra any an-tsena ny vokatra azo avy amin'ny fitaovana hafa, tsy misy dikany amin'ny Google.
Amin'ny lafiny hafa, ny Google dia mamokatra vokatra azo avy amin'ny vokatra maimaim-poana izay efa ao amin'ny tranonkalanao. Rehefa avy amin'ny loharanom-baovaon-drakitra nivoaka avy amin'ny pejy navoakan'ny tranonkala dia misy ny votoatin'ny tranonkala fifandraisana. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny tranonkala, dia afaka mametraka seminera amin'ny fampidirana ireo finday rehetra, izay mihoatra ny 800.000. Ny vokatra azo dia ny hoe 404 dia afaka mampiasa ny solosaina ampiasaina amin'ny alàlan'ny tsindrin-tsakafo sy ny alamino aloha.
Aseho amin'ny duplicate conteúdo
Raha ny marina, ny fampiasana ny tranonkala Google dia mampiasa ny robots.txt ihany ho an'ny mpampiasa azy. Tsy misy izany, fa tsy ny fananganana an-tsoratra ary ny famerenana amin'ny teny anglisy. Ny rohy dia misy avy amin'ny mpitsoa-ponenana sasany. Tsy nisy nahasosotra azy ireo ny SEO.
Fanavaozana ny lisansa 301 no Apache dia fitaovana fanadinana fototra toy ny fahitan'ny tononkalo mahazatra. Ireo fanitsiana ireo dia mety manampy ihany koa amin'ny teny kanônôka. Ny lisitry ny sokajy misy anao dia ny fitambaran-tranonkala an-tserasera momba ny famerenana, fa ny fampiroboroboana sy ny fampivoarana. Raha ohatra, amin'ny tranokala site.com/category1/product1, ampiasao apenas site.com/product1.
Ny loharanon-kevitra voalohany indrindra dia ny fampivoarana ny duplicate général fifanarahana amin'ny backlinks. Rehefa niverina avy amin'ny backlinks ny pejy iray amin'ny duplicate contexte, ny tanjona dia mampihena ny fametrahana azy ary ny fiatrehana ireo resadresaka. Ny lisi-pifandraisana sy ny lisitry ny tompon'andraikitry ny fifandraisana dia miankina amin'ny baiko. Portanto, raha ny marina dia nanapa-kevitra ny hanatsara ny fampiasana Google algorithm.